Czech Airlines Technics inowedzera huwandu hwebasa renendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Czech Airlines Technics inowedzera huwandu hwebasa renendege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Czechia Breaking News • Technology • ushanyi • kutakura • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tichifunga mamiriro azvino indasitiri yekuvhiya, Czech Airlines Technics (CSAT) yafunga kujoina masimba neFlyTech Aviation Services uye nekuwedzera huwandu hwenzvimbo dzekuchengetedza nendege nemasevhisi ekupaka panhandare dzenyika dzakawanda muCzech Republic neSlovakia. Iyo nyowani yebhizimusi chirongwa inotarisa inonakidza chikamu chemusika, parizvino inonyanya kudiwa zvakanyanya nendege, vadiki ve ndege uye vagadziri. Chibvumirano chepakeji chinosanganisa sarudzo dzekupaka ndege pamwe nekupihwa kwechengetedzo yemhando yepamusoro inomiririra mukana wakakwikwidza. Kutenda kubatana kwakasimbiswa uye ruzivo, ese makambani anogona kusvika kune vamwe vatengi.
"Tichiziva kudiwa kukuru pamusika, tafunga kuwedzera mabasa edu uye, tichishanda neFlyTec Aviation Services, kupa ndege, vatyairi vendege uye vagadziri kugadzirisa kugadzirisa pamwe chete nekupaka kwendege kunhandare dzinoverengeka muCzech Republic neSlovakia. Nekuda kwekudyidzana nekubatana, isu tinokwanisa zvakare kupa vatengi vedu rutsigiro rwehunyanzvi, mabasa ekuchengetedza, rubatsiro panguva dzekupenda nendege uye masevhisi emamwe madhipatimendi edu akasarudzika, Pavel Hales, Sachigaro weCzech Airlines Technics Board of Directors, akadaro.
Makambani ese ari maviri anokwanisa kuchengetedza vatengi vayo kwenguva pfupi uye kwenguva refu kupaka uye nekuwedzera mabasa ekuchengetedza ndege kuCzech kana kuSlovak nhandare dzenyika, idzo, nekuda kwenzvimbo yadzo, dzinomiririra sarudzo yakanaka kune vatengi veEuropean uye vasiri veEurope zvakafanana. Pamwe chete neVáclav Havel Airport Prague, uko kunowanikwa dzimbahwe nema hangars eCzech Airlines Technics, Košice International Airport, Leos Janacek Ostrava Airport, Airport Karlovy Vary uye Brno Airport inosanganisirwa mupiro. Muchiitiko apo nzvimbo dzese dzokupaka panhandare dzakanyorwa pamusoro dzakanyorwa zvakazara, CSAT ichataura nezvekuwedzeredzwa kwebasa kune dzimwe nhandare. Pakagadzirirwa kupihwa mhando dzakasiyana dzendege, kureva zvese zviri zviviri zvakamanikana-muviri uye wakapamhama-muviri. Nekudaro, izvo zvakasarudzika zviyero zveendege uye maficha enzvimbo dzekupaka dzinowanikwa pane imwe yenhandare panguva yakapihwa ichagara iri chinhu chakakosha.
"Vanamakanika vedu vanokwanisa uye mainjiniya vachashanda padhuze nepamba pavo muPrague kune dzimwe nhandare, kwavanokwanisa kuita mabasa akachengeterwa ekuchengetedza ndege. Zvese zvigadziriso zvekuchengetedzwa kwemuviri wakamanikana Boeing 737, Airbus A320 Mhuri neATR 42/72 ndege ichaitwa yakanangana mu hangar yedu iri kuVáclav Havel Airport Prague, uko kune dzimwe nzvimbo dzehunyanzvi dzeCSAT dzinowanikwa kune vatengi, "Pavel Hales akawedzera.
Kugara uchiongororwa zvehunyanzvi, kusanganisira kumhara-giya, kugadziridzwa, kupatsanura chikamu chinotsiva, kugadzirisa pendi yezvimwe zvinhu uye zvimwe zvinoenderana nebasa zvinogona kuitwa panguva yekupaka, futi. Nyanzvi dzezvikwata dziri muPrague dzinopa vashoma ndege uye vanoshanda nehunyanzvi hwakazara hweCAMO rutsigiro mukati mezvikamu zveBase Maintenance, Landing Gear Overhaul uye Ndege Spare Chikamu uye Zvigadziriso zveChinhu.